Kambodza: Feo Avy Amin’ny Tontolon’ny Bilaogy Kambodziana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 03 Janoary 2018 14:38 GMT
Nandidy ny radio sy fahitalavitra rehetra mba tsy hamaky ny lahatsoratram-baovaon’ny gazety vita pirinty ny Minisiteran'ny Fampahalalam-baovao. Heverina fa andrana hitazonana ny fanaovan-gazety matihanina ao amin'ny firenena ity hetsika ity. Mamaky lahatsoratra sasantsasany voafantina ireo mpamaky vaovao ary mametraka fanehoan-kevitra manokana ho an'ny fampielezam-peo sy ny fahitalavitr'izy ireo. Satria mahita ny ankamaroan'ny olona fa sarotra ny mividy sy mamaky gazety, ny fandefasana famakiam-baovao no malaza any amin'ny firenena izay tsy mahay mamaky teny sy manoratra noho ny fahantrana ny vahoaka.
Ary ho setrin'ny fisamborana ireo mpitsikera sisintany sy mpanao gazety amin'ny radio, vondrona mpiaro ny zon'olombelona manodidina ny 30 no nanangana ny Alliance of Freedom of Expression [Fiarahan-dian'ny Fahalalahana Maneho Hevitra] mba hanombohana fampielezan-kevitra manerana ny firenena. Mikendry hampiroborobo ny fahalalahana maneho hevitra ao amin'ny firenena ny fanentanana. Hatramin'izao, ribao (fehin-damba 60.000 no nozaraina tao an-tanàna sy tany amin'ny faritany sasany. Ankoatra ny fampahalalam-baovao mahazatra, malaza eo amin'ireo mpianatry ny oniversite ao Phnom Penh, foibe ara-barotra sy ara-kolontsaina ao amin'ny firenena ihany koa ny fidirana amin'ny vaovao sy loharanom-baovao an-tserasera. Manokatra varavarankely ho an'ny tanora mba hidirana amin'ny fitaovana ilaina antserasera ny tambajotra manerantany, indrindra indrindra amin'ny fianarany mandritra ny fiainana, sy ny fandraisana anjara amin'ny vondrona adihevitra anaty aterineto mba hizara ny hevitr'izy ireo momba ny lohahevitra manokana. Na izany aza, antsy fotsiny ny antsy; mankafy mikarajia fotsiny ny mpisera sasany, sy miditra amin'ny tranonkala tsy dia mendrika toy ny pôrnôgrafia sy ny herisetra.
Ao anatin'ny 15 taona, velona indray ny indostrian'ny sarimihetsika miadifo mafy. Nikarakara ny fetiben'ny sarimihetsika nasionaly faharoa ny firenena, izay nahitana sarimihetsika Kambodziana miisa 22, tao amin'ny Teat[i]ra Chaktomuk tamin'ny 28 Novambra 2005. Tantara Vampira sy matoatoa no ankamaroan'ny mpifaninana tao anaty lisitra. Tamin'ity folo taona farany ity, nampanano-sarotra ny fiainan'ireo mpamokatra horonantsary ao an-toerana ny lazan'ny sarimihetsika vahiny. Mahita ny sarimihetsika Thailandey, Shinoa, Amerika sy Koreana ho fialam-boly ny olona ao an-toerana raha tsy maintsy mila manao zavatra bebe kokoa mba hifaninanana amin'ny orinasa mpamokatra sarimihetsika vahiny tsara kalitao ireo mpamokatra sarimihetsika eo an-toerana. Tsy ao anaty sarimihetsika fotsiny ihany ny tantara mampihorohoro, any ambanivohitra, mivoaka lohatenim-baovao ihany koa ny famosaviana. Ny Witchcraft or sorcery (Famorehana na Famosaviana), Arb-Thmob amin'ny teny Khmer, no zavatra efa ren'ny olona hatramin'izay, saingy mbola tsy nahita mihitsy izany zavatra mampatahotra, matoatoa tapany sy tapak'olombelona izany.
Tamin'ny fiarahany nipetraka tamin'ny rainy tany Phnom Penh, vao dimy taona monja ary nafindra niala tao an-tanàna rehefa tonga teo amin'ny fitondrana ny Khmer Rouge. Tsy azony hoe nahoana izy no tsy maintsy niala tao an-tranony tany an-tanandehibe. Ny olona nahita fianarana tahaka ny rainy no lasibatry ny famonoana ataon'ny fitondrana mba hanavaozana ny fiarahamonina. Voalohany Namono ny Raiko izy ireo: tsara tarehy ny zanakavavin'i Cambodia tsaroan'i Loung Ung, ary mahazo mazava tsara ny feon'ny zaza tafavoaka velona tamin'ny fandripaham-bahoaka.